report – @mmunited
report steem steemit steempress
Steemit လုပ်တာ ဒီနေ့နဲ့ဆို သုံးလပြည့်ပါပြီ။ ရက်အားဖြင့် 91 ရက်ပါ။ တစ်ကယ်ဆိုရင်တော့ 92 ရက်မှ ပြည့်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်စောပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။ Outgoing Votes Outgoing vote ကတော့ ၁၃၁ vote ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် vote ပြန်ပေးထားတာမရှိပါဘူး။ No. Voters Percent Upvote 1 @dpakyaw 9.42@sanhtun 7.63@bobokyaw 7.44@mamamyanmar 7.25@minsoenaing 6.8 Incoming Votes Self vote ကလုံးဝမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို upvote ပေးတဲ့သူ ၃၇၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ အဓိက …
report steem steempress
Steemit လုပ်တာ ဒီနေ့ဆိုရင် နှစ်လပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ ရက်အားဖြင့် ၆၂ ရက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ 31 ရက်ဖြစ်တဲ့ လက နှစ်လဆိုတော့ နှစ်လနဲ့ပဲ တွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Outgoing Votes Outgoing vote ကတော့ ၁၀၇ vote ရှိပါတယ်။ No. Voters Percent Upvote 1 @bobokyaw 9.62@mamamyanmar 4.83@dpakyaw 4.74@aggamun 3.85@minsoenaing 3.5 Incoming Votes Self vote က ၀.၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို vote ပေးတဲ့သူ 2208 ယောက်ရှိပါတယ်။ …
fundition report steemit steempress
I will also write this post in burmese language. ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ပို့စ်ရဲ့ payout က 1.4 STU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Week #1 ထက်စာရင်တော့ ပိုများလာပါတယ်။ upvote ကနည်းသွားပြီး comment ကတော့များလာပါတယ်။ @ptcmyanmar ဆီကနေ ၁၀၀ SP ရထားပါတယ်။ SBI ရှယ်ယာ လေးခုရှိပါတယ်။ အ ခြား ရှယ်ယာတွေလဲ ဝယ်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thanks to @steempress-io, @minnowsupports, @hr1, @minsoenaing, @accelerator, @mamamyanmar, @myothuzar, @steempress and others. ရည်မှန်းချက်ကတော့ SP ၅၀၀ အထိ ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို 1 SP လောက်ရဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဒီ တစ်ပတ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ …
report steemit steempress
ကျွန်တော် steemit ကို ၂၀ ရက် ခုနှစ်လ ၂၀၁၈ မှာ စလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို ၃၂ ရက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Voting အချက်အလက်တွေကတော့ 23-7-2018 ကနေ 22-8-2018 အထိပဲ ယူလို့ရပါတယ်။ SteemSQL ကနေ ယူရင်တော့ အကုန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ 1 SBD ပေးရမှာရယ် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာရယ်ကြောင်း မသုံးတော့ပါဘူး။ Outgoing Votes Self-vote က ၁၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ အောက်က ဇယားမှာတော့ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ပါဘူး။ Vote ပေးထားတဲ့သူ ၆၉ ယောက်ရှိပါတယ်။ ၁% နဲ့အောက်ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပုံမှန် vote ပေးနေတဲ့ @steempress-io တို့ @sanhtun တို့ …